Dab khasaaro hantiyadeed geystay oo ka kacay suuq ku yaala magaalada Kismaayo – STAR FM SOMALIA
Dab khasaaro hantiyadeed geystay oo ka kacay suuq ku yaala magaalada Kismaayo
Dab geystay khasaaro hantiyadeed ayaa maanta ka kacay suuq ku yaala magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose.
Dabkaasi ayaa ka bilowday dhisme ku yaala suuqa Kismaayo oo lagu diyaarin jiray noocyada kala duwan ee macmacaanka, sida dadka goobjoogayaasha ah ay warbaahinta u xaqiijiyeen.
Khasaaraha dabka ayaa gaaray inuu gubto dhismaha guriga, waxaana waxyeelo ay kasoo gaartay mid kamid ah dadkii goobta ku sugnaa.
Lama oga waxyaabaha sababay in dabka uu ka kaco suuqa magaalada Kismaayo, waxaase lagu guuleystay in dabka uusan ku faafin goobo kale.
Daahir Amiin Jeesow oo ku guuleystey doorashada Aqalka Hoose ee Jowhar ka dhacday
Ra’isul Wasaare kuxigeenka Somalia oo goordhaw kamid noqday Aqalka Hoose